Tag: xayeysiinta bulshada | Martech Zone
Tag: xayeysiiska bulshada
Haddii aad daabacaneyso maqal ama muuqaal, waad ogtahay in mararka qaar waxyaabahaasi ay yihiin qeybta ugu fudud. Ku dar tifaftirka iyo habeynta barnaamij kasta oo bulsheed waxaadna waqti badan ku bixineysaa wax soo saarka inta aad duubista ku jirto. Dhibaatadaani waa sababta ganacsiyada badani uga fogaadaan fiidiyowga inkasta oo xaqiiqda ah in fiidiyowgu uu yahay mid dhexdhexaad ah. Promo.com waa goob fiidiyoow loogu abuuro ganacsiyada iyo hay'adaha. Waxay ka caawiyaan isticmaalayaasha inay abuuraan waxyaabo badan oo muuqaal ah iyo
Saameynta Isbeddellada Suuqgeynta Dijital ah ee Ururada Deynta iyo Hay'adaha Maaliyadeed
Talaado, Febraayo 21, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Saaxiibkiis Mark Schaefer ayaa dhowaan daabacay qoraal, 10 Epic Shifts oo dib-u-Qorista Xeerarka Suuqgeynta, taasi waa waajib in la akhriyo. Wuxuu weydiiyay suuqleyda dhammaan warshadaha sida suuqgeyntu ay si qoto dheer ugu socoto. Mid ka mid ah aagga aan ku arko dhaqdhaqaaq badan ayaa ah awoodda shakhsi ahaaneed ee xiriirka shakhsi ahaaneed ee rajada ama macaamiisha. Waxaan sheegay: Qulqulka xogtaani wuxuu macnahiisu noqon karaa “dhimashada warbaahinta baahsan iyo kor u kaca bartilmaameedyada, khibradaha suuq geynta shaqsiyadeed ee loo maro ABM iyo